संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनु ‘लभ साईडेड’ कुरा : डा. दिक्षित — Motivate News
काठमाडौँ – समाजसेवि तथा मानवअधिकार कर्मी डा. सुन्दरमणि दिक्षितले संसदमा दर्ता भएको लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रतावले देशलाई उदो गतितिर धकेलेको बताएका छन् । संसदले गर्न पर्ने महत्वपूर्ण काम नगरेर अनाआवश्यक एक जना व्यक्तिको पछि लागेर देशलाई बन्दक बनाएको उनको आरोप छ । मोटेभेट न्यूजसंग कुरा गर्दै डा. दिक्षितले संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव लव साइडेड भएको बताए ।
सांसदलाई जनताले आफ्ना अधिकारहरुको सुनिश्चितताका लागि संसदमा पठाएको भन्दै आफ्नो काम छोडेर अनाआवस्यक महाखभियोग दर्ता गराएको आरोप लगाए । सर्वोच्वले मुद्धा हेरिरहेको बेलामा संसदले महाअभियोग लगाउनु वेमौसमको बाजा भएको उनको भनाई छ । संसदमा दर्ता भएको महाखभियोगको प्रस्ताव, यसले नेपाली राजनितिमा पारेको प्रभाव लगायतका विषयमा उनै दिक्षितसंग मोटिभेट न्यूजले गरेको कुराकानीको संपादित अश ।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
अंगे्रजीमा भन्नु पर्दा यो ‘लभ साइडेड’ कुरा भयो । हुनु पर्ने एउटा थियो, भएको छ अर्को । संसद भनेको धेरै पटक गुमाएर नेपाली जनताले पाएको संस्था हो, २०१७ सालमा र २०३९ सालमा गुमाएर फेरी फर्काएको संसद हो, यो अहिले बच्चै छ । यसका ठुल्ठुला कामहरु छन् ।
जस्तै मदेशको समस्या छ, जनजातीका समस्या छन, दलितका समस्या लगायत विकास निर्माणका कुराहरु छन् । अहिले एउटा व्यक्तिको विषयलाई लिएर संसदलाई अल्झाउने समय होइन । समस्याको समाधान गर्ने संसद किन एक जनाको पछि लाग्यो भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ । मेरो विचारमा हाम्रो पैसा, जुन सांसदलाई खुवाएका छौँ, त्यो पैसा बेकारमा गएको छ ।
हामीले चाहेका थियौँ, देश स्थिरतामा जाला, मदेशको समस्या समाधान होला, दलित जनजातिका मुद्धाहरुको संबोधन होला, तर यहाँ उल्टो भैदियो । एउटा काम गर्न पर्ने संसद जनताका अधिकारहरुलाई ब्यवास्ता गर्दै महाअभियोग लगाउन तिर लागे । नेपाली जनताले दिएको तलवको दुरुपयोग भयो । एक राजाको ठाँउमा ६०१ राजाको यो देशमा राज चल्यो, महाअभियोगले देशलाई बन्दक बनायो ।
तपाईले यसो भनिरहदा जनआवाज त लोकमानलाई हटाउनु पर्छ भन्ने नै छ नि होइन् ?
हो, जनआवाज त लोकमानलाई हटाउनु पर्छ भन्ने छ तर अदालतले मुद्धा हेरिरहेको समयमा यसरी आफूलाई पनि चिठि काटिहाल्छ की ? भन्ने डरले गरेको निर्णय विधि सम्मत भएन । डा. गोबिन्द केसी अनसन बसे भन्दैमा अदालतलाई नकुरी यसरी संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनु राम्रो होइन । नेपालको सन्देश विश्वभर नराम्रो गएको छ ।
भष्ट्राचार गरेको अनुसन्धान गर्ने निकायका प्रमुख नै भष्ट्र पाइएपछि उनलाई कारवाहि गर्दा अरु पनि तर्सिने सम्भावना त छ नि ?
होइन, नेपालमा भष्ट्रचार नगरेका को छन् र ? कोहि नेताहरु तथा ठुलो पदधारण गरेका व्यक्तिहरु सबै भष्ट्र छन् । नेपालमा कोहि नेता पनि भष्ट्रचारबाट अछुत्तो छैन् । भष्ट्रचारीहरु तर्सिने होइन, भष्ट्राचारीको मनोवल झन बढ्ने सम्भावना छ । किन कि भष्ट्रचारीलाई कारवाहि गर्ने निकायलाई नै महाअभियोग लगाएर हटाइन्छ भने अख्तियारले कसरी काम गर्न सक्छ ? कसरी भष्ट्रचारीलाई कारवाहि गर्नसक्छ ?
भष्ट्रचारीलाई जनताले चाहेको खण्डका कारवाहि गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश त गयो नि होइन् ?
एउटा भष्ट्रचारीलाई हामीले फाल्यौँ, अव देशभरबाट धेरै भष्ट्रचारीहरु जान्छन् भन्ने होइन । भष्ट्रचारीलाई टिकट काट्दै गरेको व्यक्तिलाई हटाएपछि भष्ट्रचार गर्ने जो कोहि लाई भष्ट्रचार गर्ने झन प्रेणा मिल्छ । आफूलाई टिकट काट्यो वा काट्न लाग्यो भनेर महाअभियोग लगाउनु भनेको भष्ट्रचारीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । यसले देशको गति ओरालो दिशातिर लाग्छ ।
बजारमा हल्ला चल्ने गरेको छ, लोकमान नेपाल आएको भोटिपल्ट प्रधानमन्त्री देखी पार्टीका शिर्ष नेतालाई पत्र काट्ने संकेत गरेका थिए । त्यो थाहा पाउने विक्तिकै संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । के ठुला भष्ट्रचारीलाई बचाउनकै लागि संसदमा लोकमान विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हो त ?
त्यो प्रस्ट छ नि । सर्वोच्व अदालतमा लोकमानसंगै अरुपनि मुद्धाहरु दर्ता भएका छन् । अरुका फायलहरु जस्ताको तस्तै छन् । अरुले खुलेयाम काम गरिरहेका छन् । लोकमानलाई मात्र किन तत्काल महाअभियोग लगाइयो त ? मुद्धा हेरियो त ? भष्ट्राचारीलाई समात्न जाँदा उसलाई महाअभियोग लगाइएको छ । लोकमानलाई हटाएपछि आफू बचिन्छ भन्ने भ्रमले गर्दा यस्तो भएको हो । जनताले अब त्यस्ता भष्ट्रलाई तह लगाउनु पर्छ । जो सुकै किन नहोस ।
महाअभियोग लगाउँदा समाजमा कस्तो खालको सन्देश जान्छ ?
पहिलो कुरा यो गर्ने नपर्ने काम थियो । सर्वोच्व अदालतमा पुगिसकेको कुरा थियो । कि त नेपाली जनताले भन्न पर्यो, ‘अदालतमा हाम्रो विश्वास छैन्, अदालत माथि साँसदको विश्वास छैन ।’ तर त्योसो भनेर हुँदैन किन भने सर्वोच्व अदालत भनेको सर्वोच्व हो । यसको सम्मान गर्नुपर्छ ।
महाअभियोगको त विकल्पै थिएन नि होइन ? उहाँले त सर्वोच्वको मानहानी गर्नुभयो, संसदको अपहेलना गर्नुभयो, सर्वोच्वले खोज्दा खेरि भेटिनुभएन ?
लोकमान त अदालत गएनन तर अदालतले त केहि गर्न सक्थ्यो नि । अदालतमा केहि उपाय पनि नहोला त ?
नेपालमा खोज्दा न उनी भेटिए, न त उनको घर नै भेटियो, विदेशमा लुक्न गएको भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नी ?
उनको घर त भेटिएको हो तर त्यो घर भाडामा दिएको रहेछ । अर्को कुरा उनी भागेको भन्ने आरोप न हो । हुन सक्छ, उनि लुक्नको लागि विदेश जानुभएको हो । केहि कामले वा कारणले पनि गएका हुनसक्छन । तर सर्वोच्व अदालत सामान्य अदालत होइन । सर्वोच्व अदालतको आफ्नो नियम छ । यदि भनेको समयमा अदालतमा उपस्थित नभए अदालतको मानहानी गर्यो भनेर जेल चलान गर्न सक्छ । अथवा तिन चोटिसम्म अदालतमा आरोपित वा उनले पठाएको प्रतिनीधी उपस्थित नभएमा सिधै दोषि ठहर गरि कारवाहि गर्न सक्ने अधिकार छ । तर सांसदहरुले केहि दिन पनि कुरेनन । कुर्न नसक्नुको कारण के हो ? यहाँ नेर सङका उपसङकाहरु उब्जिएका छन् । राता रात महाअभियोग लगाएर निलम्बन गर्न पर्ने कारण के हो ? यहाँनेर धेरै किसिमका प्रश्नहरु उव्जिएका छन्, सङका गर्ने ठाँउहरु प्रसस्त छन् । लोकमानलाई त हटाए हटाए उनले नियूक्ति गरेको विज्ञहरुलाई कि हटाइयो ? यहाँ पनि गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।
यदि लोकमानलाई महाअभियोग लाग्यो भने त ठिक छ, यदि लागेन भने के होला ?
महाअभियोग पारित भएन भने फेरी पदमा फर्किन्छन तर त्यो पद पङगु भैकस्यो । अख्तियार पङगु भैसक्यो । त्यो पद कमजोर भैसक्यो । अव उहाँलाई दाग लागिसक्यो । उहाँको शक्ति कमजोर भैसक्यो, मनोवल हराइसक्यो । उहाँ फेरी आएपछि पहिलाको जसरी काम गर्न सक्नुहुन्न । काम गरे पनि जनताको नजरमा दाग लागेको मान्छे उहाँ, पत्याउन गाह्रो पर्छ ।
यो मुलुक कानुन न्यायको दायरामा चल्नु पर्छ । सर्वोच्ज अदालत माथि विश्वास गर्नुपर्छ । सांसदहरु झिनामसिना कुरामा जाने होइन । उनीहरुले देशको यस्तो ठुलो समस्या भएको वेलामा संसदमा संविधान संशोधनको कुरा छ, यो सल्झाउन । कतिओटा विद्येक पास गरेर निर्वाचनको लागि कानुन बनाउनु छ, त्यो गराउ । दलित, थारु, जनजाति, मदेशी सबै आन्दोलनमा छन, तिनलाई मिलाउने गरि काम अगाडी बढाउ, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउ र क्षिमेकी हरुसंगको सम्बन्ध एकदमै सुमधुर पार ।
हाम्रो देशको निति बनाउ । भारतसंगको निति के हो, चिनसंगको निति के हो त्यो बनाउ । तिमिहरु देशको हित हुने काम गर । यस्ता झिना मसिना काममा अल्झेर महाअभियोगको काममा तिमिहरु नजाउ, अहिले वेला भएको छैन । यो कुनै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले देश बेचेको कुरा होइन् । प्रधानमन्त्रीले महाकालि वेचेको कुरा होइन् । यो मेडिकल कलेजको जाँचमा, यो मेडिकल कलेजको भर्नामा हस्तक्षेप गर्यो भनेर मात्र आइरहेको छन् भुद्धाहरु । सांसदले राष्ट्रको हित हुने काममा आफ्नो समय लगाउ । अनाआवस्यक छिमेकीलाई पनि आरोप नलगाउ ।
Posted in अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार | Tagged सुन्दरमणि दीक्षित | Leaveareply